Izinsiza ze-Web incubator zamabhizinisi: iphrojekthi yeTrovaWeb
I-TrovaWeb Circuit: Izindleko eziphansi kakhulu zezinkampani.
Isihloko esivela Sole24Ore washo kahle ukuthi kusho ukuthini "be on the web", ezinkampanini njengalabo abafuna ukuthuthukisa ibhizinisi labo. È konke mayelana nengxoxo: ube khona kuwebhu namuhla akusho ukuthi kufanele uzethule nje kuphela, ngesiza esimnandi futhi esisebenzisekayo, kodwa ongakwazi futhi kufanele uxoxisane namakhasimende nabo bonke abantu abanesifiso sezimpahla nezinsizakalo obhekene nazo.
I-TrovaWeb ijoyina iSicindustria: okunye ukubambisana okuhlonishwayo
ISicindustria yinethiwekhi ehlanganisa futhi iqinise izinkampani zaseSicily
Isivumelwano phakathi siyaqhubeka I-TrovaWeb kanye namaqiniso webhizinisi owaziwa kakhulu endaweni. lomunye Ukubambisana okuthandekayo for the Ukuqala kusuka kuMessina: isikhathi sokujika ISicindustria, noma indawo yokuhlala yeSicily yeGeneral Confederation of Italian Industry.
Abesifazane ekuphathweni okuphezulu: UTrovaWeb waphayona eSicily
Abesifazane abasezingeni eliphakeme nabamabhizinisi: Umholi weTrovaWeb eMessina
Ubunono, ukuzimisela, ubuhlakani namandla e-femal onke ayisisekelo sempumelelo ye I-TrovaWeb, lo Ukuqalisa kweSicilian eholwa ngusomabhizinisi, UCaterina Doddis, amandla akhe okuphupha amakhulu umvumele ukuba afinyelele izinhloso ezinhle kakhulu.